जर्मनीले विश्वकपमा इतिहास दोहोर्याउला ? « Lokpath
जर्मनीले विश्वकपमा इतिहास दोहोर्याउला ?
फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप सुरु हुन मात्र ८ दिन बाँकी छ ।
३२ राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिताको प्रत्येक समूहमा चार टोली छन् र समूह चरणका खेलपश्चात शीर्ष २ टोली राउन्ड अफ सिक्सटिन् मा प्रवेश गर्नेछन् । सन् २००२ यता जर्मनीले विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला चार विश्वकपमा जर्मनीले २ पटक फाइनलमा स्थान बनाउदा २ पटक अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको थियो । गत संस्करणको फाइनलमा अर्जेन्टिनालाई हराउदै जर्मनीले चौथो पटक उपाधि जित्यो । यस पटकपनि जर्मनी उपाधी जित्ने सुरुमा रहेको छ ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी जेठ ३१ बाट सुरु हुने २१ औं संस्करणको विश्वकपमा इतिहास बनाउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रदैछ ।
उपाधि जितेमा जर्मनीले सन् १९६२ पछि लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने रेकर्ड बनाउनेछ । ब्राजिलले सन् १९५८ र १९६२ मा गरी लगातार दुई पटक विश्वकप जितेपछि कुनैपनि टिमले विश्वकपको उपाधि लगातार दोस्रो पटक जित्न सकेका छैनन् ।
हाल फिफा वरीयताको पहिलो स्थानमा रहेको जर्मनीले विश्वकपको युरोप छनोटमा सवै १० खेल नै जितेको थियो । छनोटका दौरान जर्मनीले ४३ गोल गरेर कीर्तिमान समेत बनाएको थियो ।
टोनी क्रुस जर्मनीलाई अघिल्लो पटक विश्वकप जिताउदा टोलीका महत्वपुर्ण सदस्य थिए । विश्वकपमा उनले गरेको प्रदर्शन वापत उनले यस वर्ष जर्मन प्लेयर अफ द एयर को उपाधि पनि जिते । रियल म्याड्रिडसँग आबद्ध रहेका क्रुसको क्लब स्तरमा पनि भुमिका र प्रभाव उत्तिकै बलियो रहेको छ ।
क्रुसले रियल म्याड्रिडलाई लगातार तीन पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जिताउन मदत गरे । अहिले जर्मनीलाई दोस्रो पटक विश्वकप दिलाउने अभियानमा छन् ।
जर्मनी विश्वकपको समूह ’एफ’ मा छ । जर्मनीले समूह चरणमा मेक्सिको, स्विडेन र दक्षिण कोरियासँग खेल खेल्नेछ । जर्मनीले पहिलो खेल जुन १७ मा मेक्सिकोसँग खेल्नेछ भने दोस्रो खेल जुन २३ मा स्विडेनविरुद्ध मैदानमा उत्र्नेछ । त्यस्तै, समूह चरणको अन्तिम खेलमा जर्मनीले कोरियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । जर्मनीका प्रशिक्षक जोचिम लो सन् २००६ देखि राष्ट्रिय टिममा आवद्ध छन् । लो सन् २००८ को युरो कप च्याम्पियनसिपमा पनि जर्मन टिममा रहे ।
सन् २०१० को विश्वकपमा जर्मनीले तेस्रो स्थान हात पार्दा पनि लोको प्रभावकारी भूमिका थियो । सन् २०१२ को युरो कपमा पनि जर्मनीले सेमिफाइनल सम्मको यात्रा मात्र तय गरेको थियो । निखारिएको खेल प्रर्दशन र उपाधीको भोको भएको जर्मनीले अन्तत २०१४ को विश्वकप जित्न सफल भयो ।
प्रतियोगितामा सहभागी ३२ मध्ये २० टोलीले यसअघिको संस्करणमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । यसपटक विश्वकपमा दुई टोलीले पहिलोपटक सहभागिता जनाउँदै छन् । आइसल्याण्ड र पानामाको यो पहिलो विश्वकप यात्रा हो । प्रतियोगितामा कुल ६४ खेल खेलिनेछ । प्रतियोगिताका खेल संचालन गर्न ११ सहरका १२ रंगशाला प्रयोग गरिनेछ ।
प्रतियोगिताको फाइनल खेल जुलाई १५ तारिखमा मस्कोको लुझिन्की रंगशालामा हुनेछ । विश्वकप विजेताले सन् २०२१ मा हुने फिफा कन्फेडेरेसन कपमा सहभागिता जनाउनेछ । यस पटकको विश्वविजेता को बन्नेछ त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,२३,बुधबार ११:२३
काठमाडौं । दश खेलाडीमा सिमित मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई बुधबार ३–१ अन्तरले पराजित गर्दै विभागीय टोली एपीएफ फुटबल क्लब आहारारा गोल्ड
काठमाडौं । फ्रेन्चाईज नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को दोस्रो संस्करण चैत अन्तिम सातादेखि सुरु हुने भएको छ । नेपाल स्पोट्स
मार्सियल लोनमा सेभिया पुगे
काठमाडौं । म्यानचेस्टर युनाइटेडका फरवार्ड एन्थोनी मार्सियल इंग्लिस क्लब म्यानचेष्टर युनाइटेडबाट लोनमा स्पेनिस ला लिगा क्लब सेभिया पुगेका छन् ।
मरिससविरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा : नौ नयाँ अनुहार, दुई खेलका लागि दुई टिम
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले मौरिसससँग हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि सबै ३४ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ
आगामी दिनमा एमाले थप बलियो बन्ने दावी
५ दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार १८ स्थानमा विजयी, निल हुनबाट जोगियो…
बसपार्क सामूहिक बलात्कारका आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश
समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा फर्काउन नपर्ने आदेश
भरतपुर विमानस्थलबाट चाँदीका गरगहनासहित दुई पक्राउ
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपरिणामम घोषणा, विजेताको मतभार हेर्नुहोस्